Double-Drum mqengqeleki mqengqeleki
Ikhonkrithi yeVibrator shaft eyaziwayo eYurophu
Mthengi othandekayo, singumvelisi womatshini wolwakhiwo wendlela. Kwaye ngoku ixesha linokubona ngakumbi nangakumbi kubasebenzisi bomntu kwisipriti sekhonkrithi. Ke sifuna nje ukuba nesingeniso esifutshane solu hlobo lomatshini. I-shaft ye-vibrator yekhonkrithi inezi zinto zilandelayo: 1) Yamkela ...
Ubugcisa obutsha bePompo yaManzi yaManzi e-Australia
Impompo yaManzi ibonelela ngokusebenza okubalaseleyo kwizicelo zokumpompa amanzi ngokubanzi. Nokuba yeyokucoca umthwalo onzima, ukunkcenkceshela igadi okanye ukumpompa isisele esinezikhukula. Ezi mveliso zinetanki lokulayisha elongezelelweyo. Itanki yamafutha eyongezelelekileyo enkulu ye-2L kuthetha ukuba inokuqhuba ukuya kuthi ga kwiiyure ezimbini ...
Imodeli eNtsha ene-perkins injini eyaziwayo e-UK
Inkampani yethu ihlala ijolise kwinkqubela phambili kunye nokuphuhlisa ngeenkcukacha zethu zomatshini. Ngoku sifuna ukuphucula intliziyo yethu yomatshini ukulungiselela isuti yeinjini yendawo engaphezulu. Injini yePerkins evela eNgilane, njengoko sonke siyazi ukuba injini ye-yanmar ibanga ilizwi elincinci kwaye yenza namandla amancinci ...
Ikhonkrithi yabona indlela ebonwayo kulawulo lothuli eNgilane
Ukuze uhambelane nemeko-bume eyahlukeneyo eNgilane, inkampani yethu ifumana nje umatshini omnye wesitayile ukuze ulungele iimfuno zakho. Diamond wabona iincakuba for eziphathekayo badla laser welding, ukuba badla yenzelwe ukusika emanzi kuba eziphathekayo ukuba kunqunyulwa idla nzima kakhulu okanye esirhabaxa. Ukuba iincakuba ...
Mini excavator ekunyuseni kunye nezixhobo zasimahla kumthengi omtsha eFrance
Ngoku amaxesha esinciphisi esincinci esincinci sithandwa ngakumbi kwezolimo kunye negadi yobuqu. Siyabona nazi iinkcukacha zenkxaso. 1.Good swing iingalo. Ingalo yokujinga ixhomekeke kwimpompo enye ye-hydraulic, yokuba zonke i-CXA, uthotho lwe-CXB zinolu fakelo. Ngala malungu, ingalo ca ...
Isicwecwe seplate esaziwayo eRomania sanelisa yonke imigangatho ye-EU
Kulwakhiwo, zintathu iintlobo eziphambili zecompactor: ipleyiti, irammer, kunye neroli yendlela. Kwaye i-Ace-oomatshini egxile kwi-rammer kunye neplate, namhlanje sifuna nje ukwenza intshayelelo emfutshane malunga necompact compact. ENgilani igama "wacker plate" okanye "wacker ...
Umbane oshushu kunye nenzuzo.
Ngophuhliso lobuchwephesha, ngoku umatshini unemodeli efanelekileyo kwaye ngamanye amaxesha unokubonelela ngokusetyenziswa okungcono kunokwesintu. Ngoku inkampani yethu yenza umatshini omtsha omnye kulwakhiwo lwendlela. Luhlobo olunye lwetrowel yamandla. Ijongeka ngathi yahlukile kancinci kumatshini wethu oqhelekileyo ...
Amandla okubamba iimveliso ezithandwayo kumatshini wolwakhiwo wendlela.
I-trowels zethu zincedisa uluhlu lwethu lwangoku ngendlela enkulu, idibanisa yonke inkqubo ukusuka ekuxinaneni komhlaba ukuya kumgangatho wekhonkrithi opolishiweyo, kwaye ingena kakuhle kwisicwangciso sethu secandelo lokukhulisa indawo yethu yeKhonkrithi kunye neMigangatho yoshishino. Ngongezo lokukhwela kwiitroli ngoku siza kuba nekhomp ...
Impompo yamanzi injini ikhetha kwaye iimveliso zibonisa
Impompo sisixhobo esihambisa ulwelo (ulwelo okanye iigesi), okanye ngamanye amaxesha i-slurries, ngesenzo somatshini, esiguqulwa kumandla ombane sibe ngamandla e-Hydraulic. Iimpompo zinokwahlulwa zibe ngamaqela amakhulu amathathu ngokwendlela abayisebenzisayo ukuhambisa ulwelo: ukuphakamisa ngokuthe ngqo, ukufuduswa, ...
Imbali kunye nohlobo lweKhonkrithi yokuXuba
Umxube wekhonkrithi (odla ngokubizwa ngokuba ngumxube wesamente) sisixhobo esidibanisa isamente ngokufanayo, isanti okanye isanti, kunye namanzi ukwenza ikhonkrithi. Umxube wekhonkrithi oqhelekileyo usebenzisa igubu elijikelezayo ukudibanisa izinto. Omnye wabaxube bekhonkrithi wokuqala owakhe waveliswa ngo-19 ...
Iziqhotyoshelweyo zeMini Excavator ukwenza uMsebenzi ongcono
Abembi abancinci bahlala bethandwa ziindawo zemisebenzi ezineendawo zokuhlala ezixineneyo, ezikwaziyo ukuya apho oomatshini abakhulu bengenako. Izinto zokumba ezincinanana zikulungele ukusebenza ngasemva kwezakhiwo, ngaphakathi kwizakhiwo nakwiindawo ezibiyelweyo zokumba, ukuphakamisa nokucoca. NDIGQIBILE Amabhakethi asemgangathweni emba umhlaba ngeenjongo ezininzi, ...
Umxube wekhonkrithi kufuneka anelise iimfuno zabasebenzisi bokugqibela
Kule minyaka ingama-2020 idlulileyo umxube wekhonkrithi ikwayeyona mveliso iphambili yokuthengisa kwinkampani yethu, kwaye sinokunikezela ngobungakanani obahlukeneyo ukusuka kwiMini (80L) ukuya kwilori (4.3 CBM). Kwaye bonke abathengi bethu bafuna nje ukwenza umsebenzi ongcono. Okokuba njengomthengisi, iimveliso zixhomekeke kwimathiriyeli eluhlaza nakwizinto ezilungileyo. Ke kwi ...